Actualizări și știri ale site-ului /
Kulo myalezo sizobheka ngokucophelela ama-conglomerat amakhulu athatha izinkampani eziningi zokubamba iminyaka embalwa edlule – i-Endurance International Group – i-EIG.
Namuhla, inkampani kufakwe kuhlu ku-NASDAQ futhi zenani lama- $ 686,7 $ wezigidi (ukuhweba ngama- $ 3,51 – 7,74 USD kumaviki angama-52 adlule).
Kodwa-ke, ukubheka okwenkampani Umphumela wamuva wezezimali, inkampani ingenisa imali engama- $ 277.2 $ wezigidi ngokulahleka okuphelele kwezigidi eziyi-12.3 zamaRandi ngonyaka Wezimali we-2019.
Bonke ababhalisile epulatifomu ye-EIG ngoDisemba 31, 2019 babeyizigidi ezingama-4.766; kuqhathaniswa nababhalisile abacishe babe yizigidi ezingama-5.217 n.u 30 iunie 2017 kanye nezigidi ezingama-5.011
ababhalisile ngo-31 martie, i-2018.
Isifinyezo se-Endurance International Group Holdings, intek yokwabelana ye-Inc ngonyaka owodwa edlule (ngoFebhuwari 2020).
IX Gazduire Web – 2015
I-Networks Web Gazduire
Yonke into etholakalayo ivela engozini kanye nokungaqiniseki – futhi njengoba abanye bangalindela, marca nu-zeig EIG "zishiywa ukifi zifile" ngenkathi i-conglomerat iqhubeka ikhula futhi ithululela izimali kwezinye izindawo.
Gazduire InMotion – Gazduire Ikhaya le-Web Secret Eliveziwe!
Interserver – I-VPS ieftin și flexibil yokusingatha umhlinzeki.